Saddex Dhacdo oo Talyaani ah ayaa Dalxiiska Kordhiyey Iyada oo Kordhin Kalsooni leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Saddex Dhacdo oo Talyaani ah ayaa Dalxiiska Kordhiyey Iyada oo Kordhin Kalsooni leh
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
TTG, SIA iyo SUN 2021 ayaa si guul leh u dhammaaday
Markii si guul leh loogu soo gabagabeeyay TTG, SIA, iyo SUN 2021, waa rajada Wasiirka Dalxiiska ee Talyaaniga, Massimo Garavaglia in bartilmaameedka kobaca dalxiiska ee 20% GDP uu yahay bartilmaameed la gaari karo.
TTG, SIA iyo SUN 2021 ayaa ku soo dhawaaday Xarunta Rimini Expo Center (Talyaaniga) iyadoo dadka soo booqda ay diiwaangelinayaan 90% tirada la duubay daabacaadda 2019. Waxaa soo qabanqaabiyay Kooxda Bandhigga Talyaaniga, saddexda munaasabadood, oo isugu jira silsiladda sahayda dalxiiska, waxay arkeen isbeddel dhab ah oo ku yimid qalooca kalsoonida hawlwadeennada: oo ah mawduuc muhiim ah oo lagu furay daabacaadda sannadkan. Dalxiiskii Talyaaniga iyo kii caalamiga ahaa haddaba halkan ayuu dib uga bilaabmaa.
Suuqa dalxiiska ee Talyaaniga oo ay soo qabanqaabisay Kooxda Bandhigga Talyaaniga ayaa taabtay heerarka imaanshaha ka hor masiibada.
1,800 oo summadood, xaqiijin, iyo galitaanno cusub oo ka yimid dalal badan oo shisheeye iyo gobollo Talyaani ah ayaa goobjoog ahaa.
In ka badan 200 oo dhacdo oo ku yaal 9 goobood oo mowduuc ah 650 saacadood oo dood iyo xog ah ayaa si gaar ah loogu talagalay xirfadleyda warshadaha.
Dib-u-bilawgii arkay 700 oo iibsadeyaal ah oo ka kala yimid in ka badan 40 waddan oo shisheeye ah (badidoodu waxay u soo xaadireen muuqaal ahaan iyagoo la jaanqaadaya kuwa ka yimid waddammada u baahan lahaa duullimaadyo dhaadheer), 62% Yurub iyo 38% dalal aan Yurub ahayn. 80% hawlwadeennada loo xushay ku-habboonaanta dalxiiska firaaqada (laga bilaabo safar kooxeed ilaa soo-jeedinno la sameeyay) oo qayb dheeraad ah ku leh MICE (Shirarka, Dhiirrigelinta, Shirarka iyo Bandhigyada). Fidiyay in ka badan 19 hoolal, 1,800 summad ayaa ka soo qeybgalay iyo in ka badan 200 oo munaasabadood ayaa la dhigay in ka badan 250 oo ku hadla sagaal “Arenas” muddo 650 saacadood oo dood iyo macluumaad ah.
Natiijooyin si fiican uga gudbay filashooyinkii oo u dhowaaday heerarkii hore ee masiibada, iyagoo amaan ballaaran ka helay dhammaan daneeyayaashii joogay oo ku lug lahaa samaynta farriin dhiirranaan iyo hal-abuur u leh waaxda sida weyn u saameysay adduunka oo dhan masiibada masiibada. Soddonka waddan ee shisheeye ee ka qeybgalaya TTG, oo qaarkood Talyaanigu ka furay waddooyin caafimaad, ayaa bixiyay astaanta kalsoonida ee suuqa dalxiiska ee abaabulan sugayay. Kulaylaha, Bariga Dhexe, Ameerika iyo saxanka Mediterranean, iyo sidoo kale Yurub, waxay ku neefsadeen nolol cusub si ay ugu dhigmaan xirmooyin dalxiis oo caalami ah oo cusub.
Iyada oo ay weheliyaan ururada ganacsiga ee ugu wakiilka badan, laga bilaabo Federalberghi ilaa qaybaha ay matalaan Confturismo, ASTOI (Ururka Hawlaha Dalxiiska), FTO (Xiriirka Dalxiiska Abaabulan), oo ay ku jiraan FAITA Federcamping, SIB (Ururka Dhismaha Badda), iskaashiga hay'adda ENIT (Guddiga Dalxiiska Talyaaniga) , Gobollada, adduunka cilmi -baarista ISNART, Milan Polytechnic iyo CNR (Golaha Cilmi -baarista Qaranka) iyo falanqeeyayaasha isbeddelka suuqa iyo macaamilka, jadwalka kulammada ayaa la diyaariyey si ay u matalaan dalxiiska mustaqbalka.
Nooc dalxiis oo wada-hadal la yeelan doona hay'adaha si dhaqso leh loogu qalabeeyo aaladaha looga baahan yahay bilowga cusub: laga soo bilaabo soo jeedinno la soo jeediyay si kor loogu qaado qaybta martigelinta marka la eego kaabayaasha iyo fikradaha si loo daboolo baahida sii kordheysa ee tayada, xeelado cusub oo warshadeed, sida kiiska ITA (Gaadiidka Cirka ee Talyaaniga), oo xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay joogtaynta bay'ada iyo dhaqaalaha iyada oo la shaqeyneysa diyaaradaha jiilka ugu dambeeyay iyo buuxinta baahida duullimaadyada tooska ah ee waddooyinka qaaradda.
TTG ayaa sidoo kale caddeysay in dhulalku si aad ah u sii takhasusi karaan iyagoo dhegeysanaya xirfaddooda iyo kor u qaadista hantidooda dhaqameed ee aan la taaban karin iyo alaabooyinka aan caadiga ahayn, laga bilaabo dalxiiska khibradda leh illaa waddooyinka khamriga. Isbeddellada suuqa ayaa loo baahan yahay in horay loo sii ogaado aragti fog si loo soo nooleeyo awoodda tartan ee dalxiiska Talyaaniga ee suuqyada caalamka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee 58 -aad ee TTG waxay ku hadlayeen luqadda kalsoonida dadka, nolosha, dabeecadda iyo mustaqbalka. Intii lagu guda jiray xafladda furitaanka, Wasiirka Dalxiiska Massimo Garavaglia wuxuu muujiyay rajada ah in qiimaha dalxiisku uu kobci doono 20% GDP iyada oo ay ugu wacan tahay saamaynta isku dhafka ah ee sumadda Talyaaniga iyo tallaabooyinka ay Dowladdu qaadday ee ku aaddan ganacsiga iyo shaqada.
Si loo xuso sannad -guuradii 70 -aad ee SIA Hospitality Design, afar bandhig - Qolal, Bannaanka, Fayo -qabka iyo Hoteelka Dhaqdhaqaaqa - oo ay soo diyaariyeen naqshadeeyeyaal ku takhasusay soo dhoweynta iyo naqshadeynta qandaraaska, waxay muujiyeen hal -abuurnimo iyo horumar ka dhacay hoteellada Made in Italy iyadoo ay jirto raaxo yar, joogteyn iyo feejignaan weyn xagga ladnaanta jireed iyo maskaxeed ee martida, iyadoo fiiro gaar ah la siinayo dheelitirka u dhexeeya meelaha xiran iyo kuwa furan.
SUN Beach & Style Style, daabacaaddeedii 39 -aad, ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay barnaamij ay ka buuxaan fikrado cusub oo loogu talagalay shirkadaha dibadda, goobaha maydhashada iyo xeryaha. Fikradaha cusub ee dhalaalaya waxay mideeyeen baahida loo qabo naqshadeynta, feejignaanta si faahfaahsan iyo ruuxa furan ee suuq aad u suurta gal ah labadaba Talyaaniga iyo dibaddaba, oo ay ku jiraan dalalka qabow ee waqooyiga Yurub. Waxayna SUN sidoo kale siisay aalado ay shirkaduhu ku takhasusaan qaybtan, iyada oo doodo la bartilmaameedsaday barnaamijka Bannaanka Dibadda iyo si gaar ah diiradda loogu saarayo mawduucyada kala duwan ee Beach Arena teknolojiyadda cusub ee dhijitaalka ah ee xeebaha hadda u baahan yihiin inay ku siiyaan macaamiisha adeegyo cusub nasashada iyo badbaadada.
Intaa waxaa sii dheer, sannadkan hoolalka SIA waxay sidoo kale soo bandhigeen dhacdada Superfaces cusub, suuq b2b gaar ahaan agabyada hal -abuurka leh ee gudaha, naqshadeynta iyo dhismaha.
IEG waxay rajeyneysaa inay mar kale la kulanto dhammaan warshadaha dalxiiska Talyaaniga iyo kuwa caalamiga ah Xarunta Rimini Expo Center laga bilaabo Oktoobar 12-14, 2022.